N’ihi na weebụsaịtị dị iche iche nwere mkpa dị iche iche – Kedu ihe kachasị m mma nwere ike ọ gaghị adị mma maka gị. Peeji mmeghe nke 5 – 20 kacha enye ndị ịbịa weebụ nwere ike ịba uru maka ndị na-achịkọta ndepụta ịzụ ahịa؛ ezigbo ndị ahịa chọrọ ụzụta ASAP میزبان وب ga-achọ nkọwa ndị ọzọ.
سایت ogologo ndepụta nke nnabata anyị، Ahọpụtawo m 10 ụlọ ọrụ weebụ kachasị mma:
Anyị ga-enyocha ha ntooto wee tulee ụzọ ha si dị iche na ibe a.
1 10 Companieslọ ụrụ Bochum kachasị mma nke Web: جوانب مثبت-مخالف & حکم
1.4 7. TMD بوچوم
1.5 نیوشا نیوچا
1.7 نیوشا نیوچا
2.4 5- Nke kachasị mma maka azụmaahịa obere
2.5 8. نمالیت Ndị Ọrụ Nlekọta-Enyi
2.5.1 Bochum Weebụsaịtị kachasị mma nkeonwe: GreenGeeks، Hostinger، TMD Bochum Dị ka ọbịa maka ndị edemede، nnabata websaịtị nkeonwe kwesịrị ịbụ nke dị ọnụ ala ma dịkwa mfe iji. N’agbanyeghị ma ọ bụ ibipụta CV ga ma ọ bụ kwalite “njirimara nke aka gị” – Onye na-ewu saịtị dị mfe، njirimara webmail wuru na ọnụahịa dị ụnụ ala bụ ihe kachasị mkpa nata na na na. ماکا بین ما و الیتا naanị otu weebusaịtị ، Hostinger na-enye ihe kachasị dị ụnụ ala ($ 0.80 / دلار در ماه و ndebanye آها). Bochum TMD na GreenGeeks na-enye ihe dị ụnụ ma ha nwere ebe nrụọrụ weebụ na-akparaghị ókè ma na-enye nkwado ndị ahịa dị mma. Bochum kachasị mma maka Ndị ụrụ UK: Kinsta، SiteGround Iji Ghọta ihe na-eme onye web kasị mma maka otu ọnọdụ، ọ dị anyị mkpa ịtụle Nkwụsị. Kedu ihe nkwụsị?
2.5.2 جینی صرف nsogbu eji egbu egbu?
2.5.3 Yabụ kedu میزبان وب kacha mma maka weebụsaịtị UK?
2.6 12. Nke kachasị mma maka Webụsaịtị مالزی & سنگاپور
10 Companieslọ ụrụ Bochum kachasị mma nke Web: جوانب مثبت-مخالف & حکم
ọlọ ọrụ nchịkwa dabeere na LA nke edobere na 2001. Nwee ma jikwaa Web Bochum Hub.
مپوتا: 3.99 دلار در ماه
ike: 5.99 دلار در ماه
کوا: 13.99 $ / ماه
کلید اصلی: رایگان ngalaba ، na-akparaghị ókè nchekwa ، ایمیل اوزی ، خودکار-SSL ، drag-na-dobe ụlọ ụrụ، 90 bọchị ego azụ nkwa.
ụnụahịa ahịa na-abawanye mgbe mbido mbụ.
Nkọwapụta Ụlọ ụrụ
Ejiri Sunil Saxena na Todd Robinson na 2001 guzobere Bochum nke Mmasị. اطلاعات بیشتر در لس آنجلس ، کالیفرنیا ، ویرجینیا بیچ ، VA na Denver CO ، داده های یانا ebe در لس آنجلس ، کالیفرنیا ، na Ashburn ، VA.
Ha nwekwara ma jikwaa Web Bochum Hub na ugbu a na-eji ihe karịrị 300 rụ na ha ụlọ ụrụ.
InMotion Bochum bu ihe web nke mn nototo ntooto onootu Onyenwereochie na-akwado na InMotion VPS ma enwere m obi anụrị maka arụmọrụ ha.
Ihe ole na ole na-eme InMotion Bochum na-apụta bụ sava ejiri ha (nke na-enweta mgbe niile> 99.98٪ به موقع) na ezigbo ndị nkwado ha. Ọ bụrụ na ị nwere nsogbu ọ bụla ma ọ bụ ajụjụ، nkwado ndị ahịa ha na-adị ngwa ngwa ịzaghachi.
Companylọ ụrụ ahụ na-enye atụmatụ nnabata atọ dị oke mma maka nnukwu weebụsaịtị yana VPS na Bochum raara onwe ya nye maka saịtị buru ibu.
Mbugharị saịtị na saịtị maka ndị ụrụ oge mbụ.
Nkwado ndị ahịa 100٪ n’ime lọ.
نرم افزارهای مخرب Viruslọ na nje mepụtara na nyocha.
Gbalịa ịchọta naanị 0.01 $ ụnwa mbụ (koodu dere: WHSRPENNY)
Interserver nwekọrịta Bochum dị mma maka ndị na-ede blọgụ na obere azụmahịa. Maka ụlọ ụrụ buru ibu na ebe nrụọrụ weebụ nwere okporo ọzọ dị arọ – sava ndị rụ VPS و NJ ha ha na-enye ezigbo mgbanwe.
سایت Ntọala na 2004 na otu ndị enyi na mahadum. Bulgarialọ ụrụ na بلغارستان ، ایتالیا ، اسپانیا ، انگلستان ، ایالات متحده.
ممالیت: 3.95 دلار در ماه
کلید اصلی: Clọ rụ CMS wuru n’ime ، ایمیل اوزی ، HTTP / 2 nyeere ، Ka Encrypt Wildcard SSL.
E hiwere SiteGround na 2004 site na otu ndị enyi na mahadum na Sofia، بلغارستان. Taa، ọlọ ụrụ ahụ bụ Tenko Nikolov، Reneta Tsankova، na Nikolay Todorov.
ọlọ rụ ahụ emeela ka ndị ọrụ 400 jiri ọrụ ndị dị na Bulgaria، Ịtali، Spain، Kingdom، United Kingdom mee ihe. داده های مربوط به اطلاعات 6 isi na ایالات متحده ، هلند ، انگلستان ، و سنگاپور.
Ụlọ ọrụ ndị ọzọ siri ike، SiteGround bụ otu n’ime lọ rụ ole na ole na-agbalịsi ike ịnye ọrụ ụlọ ọrụ a pụrụ ịdabere na ya site na atụmatụ ndị ụhụrụ.
Otu ihe dị otú ahụ bụ Super Cacher، nke bụ ngwá ọrụ na-arụ ụrụ nke nwere ike ime ka ebe nrụọrụ weebụ rụọ ngwa ngwa. Njirimara ọzọ bụ ikike ịwụnye Ka Encrypt SSL jiri nanị ntinye ole na ole، na-eme ka ọ dị mfe maka ndị ụrụ iji hụ na ebe nrụọrụ weebụ ha dị.
bụ ezie na ịkwụ ụgwọ maka ịmegharị ọhụụ nwere ike ịtụle obere mgbago، ọ bara uru ọfụma maka ogo mba ndị ị na-enweta na nloghachi. Echere m na SiteGround dabara adaba maka ndị ọchụnta ego na ndị na-ede blọgụ achkachamara na-achọ ngwọta nnwere onwe na-enweghị nsogbu.
سایت کامل اطراف nyochaa ebe a
Enyi gburugburu ebe obibi – 300٪ Bochum kore (nke kacha elu nke ụlọ ụrụ).
Framework Genesis na StudioPress na-akwụghị ọgwọ.
Ndị ọrụ ụ bụla na-achọ ihe ngwọta میزبان دوستدار محیط زیست ، newbies ، onye na-ede blọgụ، ndị ọchụnta ego pere mpe، ndị ụrụ mmefu ego، ndị rụ na-anaghị akwụ ụgwọ.
Guzosie ike 2004، Hostinger bụ ọlọ ọrụ Bochum mmefu ego na-agba ọsọ n’ọtụtụ ebe data n’ụwa niile.
Ekekọrịta Naanị: 0.99 دلار در ماه
Akaụntụ Ekekọrịta: 2.89 دلار در ماه
Ikekọrịta Ahịa: 3.99 دلار در ماه
کلید Atụmatụ: رایگان ngalaba، newbies-enyi na enyi na saịtị na-ewu ụlọ، ụnụ ala .xyz ngalaba، dị ala ọnụ kè Bochum atụmatụ.
Ugbu a onyeisi lọọrụ Arnas Stuopelis na-achịkwa ya، e guzobere Hostinger na 2004 dị ka ụlọ ụrụ "Bochum Media" nke bootstrapped na Kaunas، لیتوانی. Afọ ole na ole mgbe nke ahụ gasịrị، ha malitekwara 000Webhost، ọrụ ntanetịime weebụ n’enweghị mgbasa ozi.
N’agbanyeghị na ọ bụ ụlọ ọrụ na-emefu ego، Hostinger nwere 8 data data dị n’akụkụ ụwa nile na Singapore bụ ihe mgbakwunye ọhụrụ ha. A na-edekwa ha na mba 39 ma bụrụ onye na-edeba aha na ICANN zuru oke.
Kemgbe ha malitere، Hostinger aghọwo ụlọ rụ ụlọ rụ a maara nke ọma na-akwado 29 nde ndị ọrụ na nkezi 20،000 hụrụ ọrụ ntinye aka kwa ụbọchị na 2017.
ایسی گه ائمه کا هه نوه ọganihu؟ Inye ụda nke njirimara njirimara na obere ọnụahịa (otu n’ime ndị dị ọnụ ala na ahịa، lee okpokoro) maka ndị ụrụ ya.
میزبان kwesịrị ịlele ma ọ bụrụ na ịchọrọ ọtụtụ njirimara atụmatụ dịka o kwere n’ekwesighi ịfụfu ego gị.
Newbies، ndị na-ede blọgụ، ndị obere ụlọ ahịa na ndị na-azụ ahịa، ndị ụrụ mmefu ego، ndị nweere onwe ha، ndị na-anaghị akwụ ụgwọ، ndị na-aụụ maka weebụsaịtị، edịdọlu تجارت الکترونیک ، ọlọ ahịa n’ịntanetị ، na nnukwu ebe nrụọrụ weebụ.
7. TMD بوچوم
Tọrọ ntọala na 2007، TMD Bochum kpuchitere usoro gwọ Bochum niile: به اشتراک گذاشته شده ، نمایندگی فروش ، VPS Cloud ، WordPress مدیریت ، Na Raara Onwe.
Atụmatụ Atụmatụ: 2.95 دلار در ماه
Atụmatụ azụmahịa: 4.95 دلار در ماه
نینو آهیا: 7.95 دلار در ماه
کلید اصلی: Ngalaba a na-akwụghị ọgwọ، Weebly dị njikere، ikpe 60-ụbọchị n’efu، NGINX، Ka anyị Encrypt WildCard SSL، koodu nkwụghachi ụgwọ pụrụ iche “WHSR7”.
ụnụahịa mmeghari ego bara uru.
Profaịlụ ụlọ ụrụ
Bochum TMD anọwo ihe karịrị 10 afọ ma ewere ya dịka nhọrọ a pụrụ abdabere na ya maka ndị chọrọ mkpa nnabata nnabata webusaiti.
داده ها از طریق سایت و اطلاعات در مورد ایالات متحده و اطلاعات مربوط به اطلاعات آمستردام ، یک TMD بی نظیر Bochum ntinye و انتخاب ویرایشگر رایانه شخصی.
Bochum TMD na-enye atụmatụ Bochum dị iche iche، gụnyere nkekọrịta، نمایندگی فروش، VPS، igwe ojii، njikwa WordPress، na rụ Bochum raara onwe ya nye.
TMDHosting ezughị oke mana ana m akwado TMD Bochum maka ndị na-ede blọgụ ma ọ bụ obere azụmaahịa na-aba etiti na-achọ ngwọta weebụ Bochum pụrụ ịdabere Ọ bụghị naanị na ha na-enye arụm k aririmiritiri mana ha nwekwara ụfọdụ ndị otu nkwado ahịa kachasị mma na ụlọ rụ.
Ọ bụrụ na ị na-atụle atụmatụ Amalite Ijekọ، M ga-atụ aro ka ị gaa maka Ụlọ Ahịa Atụmatụ dị ka ụgwọ dị ogologo oge bụ ihe ọzọ ma ọ bụ karịa (8.95 $ / mo vs 9.95 $ / مرد) -enwe ezigbo mma arụ ụrụ nkesa na ikike.
Enwe mbata maka ndị ụrụ oge mbụ.
اونای مپتتا-انیی انی نای الی البا ابی و آکپاوا کوا ụbọchị.
وردپرس Ndị mmepe، mmepe mmepe na ụlọ rụ mgbasa ozi، yana ndị ọrụ WordPress dị elu.
Guzosie ike na 2007 ، nke ndị nwe obodo ndịda Ebe ụwụwa Anyanwụ Eshia na ụlọ rụ Exabytes.
WP Dị Mkpa: 17 دلار در ماه
WP Geek: 77 دلار / چاقو
کلید اصلی: Ngalaba .blog n’efu ، profaịlụ HTTP / s & NGINX، akwụkwọ SSL n’efu، XPX 100 + isiokwu WP، Jetpack Personal / achkachamara gụnyere.
Ngwakọta agwakọta na ule ọsọ ọsọ جیسون.
ụnụ ego ọganihu bara uru (40٪ nkwụnye ego).
Ndịọrụ niile nke ndị Exabytes dị n’aka ndịda Ebe Ọwụwa Anyanwụ Eshia، WPWebHost malitere njem ha na 2007 ma na-eche iji nye ndị ụrụ ihe dị mkpa na nkwukọrịta nkà na ụzụ maka Weepụress.
اطلاعات جدیدی در مورد دنور ، شرکت و ما در سنگاپور در مورد سنگاپور وجود ندارد و اطلاعات ما در آمریکا و آسیا اقیانوس آرام.
WPWebHost bụ otu n’ime lọ rụ ntanetị weebụ dị na Ndịda Ebe Ọwụwa Anyanwụ Asia na mgbe ha nọ na azụmahịa kemgbe 2007، ha na-anọgide na-enye ego na asọmpi ọnụahịa n’ihi na ha Word.
ụnụahịa dị oké ọnụ ahịa na-eme ka WPWebHost bụrụ maka nlebara anya maka ndị ụhụrụ na-achọ nchịkọta ego WordPress na-ejighị ọnụ ma nwee ntakịrị ego.
Otú ọ dị، ngwa ngwa ha na-aza ọsọ ọsọ na ọrụ ndị ahịa na-enweghị ego bụ ihe isi nchịkwa nke ị nwere ike ịchọrọ tupu any banye.
دیوار آتش Nchedo + DDoS na atụmatụ niile.
Lọ ọrụ mmepe na azụmaahịa، ndị rụ nnabata ụlọ ọrụ، ebe nrụọrụ weebụ azụmahịa buru ibu، ndị na-emepụta egwuregwu ntanetị، ntanetị، ọlọ ahịa n’ịntanetị.
ọzọ، ka anyị jiri ọnọdụ dị iche icke nke ụlọ ọrụ Bochum a na-eji ọkwa dị elu eme ihe.
Kachasị mma maka weebụsaịtị Weebụsaịtị: A2 Bochum، InterServer، Hostinger
N’ihe banyere òkè میزبانی وب ، ị na-enwekarị oke na ọnụ gụgụ weebụsaịtị ị nwere ike ịnabata kwa akaụntụ dabere na atụmatụ. Ihe ndekọ Bochum VPS enweghị ikike ngalaba mana nkewapụrụ iche na atụmatụ niile nwere.
شرکت Weebụsaịtị nke 1Ebe nrụọrụ weebụ 2-10 ọbịaUnlr نامحدود
3.99 دلار / چاقو 5.99 دلار / چاقو 13.99 دلار / چاقو
4.00 دلار / چاقو 4.00 دلار / چاقو 4.00 دلار / چاقو
3.95 دلار / چاقو 5.95 دلار / چاقو 11.95 دلار / چاقو
2.95 دلار / چاقو 5.95 دلار / چاقو 11.95 دلار / چاقو
0.90 دلار / چاقو 2.89 دلار / چاقو 3.99 دلار / چاقو
92/3 دلار / چاقو 4.90 دلار / چاقو $ 9.31 / چاقو
2.95 دلار / چاقو 4.95 دلار / چاقو 7.95 دلار / چاقو
3.00 دلار / چاقو 17.00 دلار / چاقو 77.00 دلار / چاقو
مارا – Kinsta na LiquidWeb anaghị enye rụ mba ndị ọzọ nwere nkewa.
شرکتNtinye nbanyeMid سطح اضافه شده
17/99 دلار / چاقو 29.99 دلار / چاقو 49.99 دلار / چاقو
18.00 دلار / چاقو 30.00 دلار / چاقو 54.00 دلار / چاقو
80.00 دلار / چاقو 120.00 دلار / چاقو 160.00 دلار / چاقو
20.00 دلار / چاقو 40.00 دلار / چاقو 80.00 دلار / چاقو
12،95 دلار / چاقو 29.95 دلار / چاقو –
25.00 دلار / چاقو 35.00 دلار / چاقو 50.00 دلار / چاقو
29.97 دلار / چاقو 52.97 دلار / چاقو 62.97 دلار / چاقو
400.00 دلار / چاقو 900.00 دلار / چاقو 1500 دلار / چاقو
29.00 دلار / چاقو 49.00 دلار / چاقو 69.00 دلار / چاقو
مارا – atụmatụ atụmatụ VPS (ihe dị ka) nkọwapụta: wakwa ntinye – 4 GB Ram، nchekwa 75 GB؛ N’etiti etiti – 6 GB Ram، nchekwa 150 GB؛ دی الو – 8 گیگ رم ، nchekwa 250 گیگابایت. InterServer nwere nhazi ihe nkesa na-agbanwe agbanwe dị ka ha nwere / jikwaa etiti data ha ma na-enye ngwọta nnabata nke collocation.
Atụmatụ niile Atụmatụ niile Atụmatụ niile جهانی ms 500 ms
Atụmatụ niile توربو (nkekọrịtakọrịta) ma ọ bụ karịa Atụmatụ niile جهانی ms 500 ms
Atụmatụ niile Atụmatụ niile Atụmatụ niile جهانی ms 200 ms
Atụmatụ niile Atụmatụ niile Atụmatụ niile ایالات متحده آمریکا ایشیا ms 700 ms
Atụmatụ niile Naanị na Bochum WP achịkwa Ee ee achọrọ nhazi ایالات متحده & اتحادیه اروپا ms 450 ms
Node.js nnabata na-ebido naanị $ 3.70 / mo na A2 Bochum.
Imirikiti ndị web na-ahụ maka weebụ anaghị enye ihe dị ukwuu n’ụzọ nke ndị nrụpụta maka akaụntụ nnabata. A2 Bochum na Interserver bụ ndị a na-adịghị ahụkebe na-eme. Maka ndị na-ele anya na VPS Bochum، na-ahazi ọtụtụ gburugburu.
5- Nke kachasị mma maka azụmaahịa obere
باغ وحش Ka Kasị Mma WordPress Bochum maka Ndị ụrụ Di elu: Kinsta، SiteGround
Enwere ọtụtụ ọkwa nke ndị ụrụ WordPress، site na ndị bịa oge mbụ ruo ndị ahụ maara nke ọma na ha nwere ike hazie ụrụ WordPress nke ha. Thismara nke a، ndị nnabata web na-enyekwa ụdị atụmatụ dị iche iche yana atụmatụ WordPress nke akọwapụtara dịka بهینه سازی افزونه ها. Atụmatụ WordPress jisiri bụ nhọrọ dị mma maka ndị na-achọ nduzi a na-eduzi. Enwere ụfọdụ ndị ịbịa na-enwekwa ndị achkachamara WordPress dị ka ndị ụrụ nkwado.
CompanyEjiri WordPressNkwado Wkachamara na WPAtụmatụ WordPress pụrụ iche
BoldGrid – وردپرس وردپرس
Staging، WP-CLI، A2 kachasị – ngwa mgbakwunye pụrụ iche maka arụmọrụ kachasị mma
Bochum Weebụ kacha mma maka ndị edemede: GreenGeeks، Hostinger، TMD Bochum
Ihe Nlereanya – Bochum ekerịta Bochum na-ebido naanị $ 0.80 / mo – زورو okè maka ndị nweere onwe ha chọrọ websaịtị dị mfe.
Maka ndị edemede، ịhọrọ onye web na-azọpụta oge bụ ihe kachasị mkpa. Onye na-ewu saịtị dị mfe (itinye saịtị na idozi ya ngwa ngwa)، webmail (ka gị na ndị ahịa na ndị mbipụta wee kwurịta okwu)، na ọnụahịa ọnụ ala (isi ahịa gị na-ede) bụ ia چری.
3.99 دلار / چاقو
4.00 دلار / چاقو
3.95 دلار / چاقو
2.95 دلار / چاقو
0.80 دلار / چاقو
92/3 دلار / چاقو
29.00 دلار / چاقو
3.00 دلار / چاقو
25.00 دلار / چاقو
مارا – Ndebanye aha maka nnabata websaịtị otu.
8. نمالیت Ndị Ọrụ Nlekọta-Enyi
Kachasị mma maka ogologo oge: A2 Bochum ، InterServer
Ndị nwe ebe nrụọrụ weebụ maara na itinye ego maka mbu bụ naanị akụkụ nke ọgwọ ha na-efu. Nke a bụ n’ihi ihe dị iche iche dịka ọnụego nnabata. Imirikiti ndị na-eweta ọlọ ụrụ weebụ na-enye ọnụọgụ nbanye ego nke siri ike iguzogide. Agbanyeghị، ụnụahịa na-arị elu nke ukwuu mgbe oge iji mee ka atụmatụ gị dị ụhụrụ. Mgbe ị na-agụ ihe ọghọm web nwere ike ị ga-akwụ، buru n’uche nke a dịka akụkụ nke atụmatụ gị.
شرکتNtinye ^ ụhụrụnkwa
3.99 دلار / چاقو 9/99 دلار / چاقو Oge ikpe 90 n’efu
4.00 دلار / چاقو 4.00 دلار / چاقو Oge ikpe 30 n’efu
3.95 دلار / چاقو 11.95 دلار / چاقو Oge ikpe 30 n’efu
5.95 دلار / چاقو 14،95 دلار / چاقو Oge ikpe 30 n’efu
2.15 دلار / چاقو 11.95 دلار / چاقو Oge ikpe 30 n’efu
92/3 دلار / چاقو 7.99 دلار / چاقو Oge obula ego azu
4.95 دلار / چاقو 7.95 دلار / چاقو Oge ikpe 30 n’efu
60.00 دلار / چاقو 60.00 دلار / چاقو Oge ikpe 30 n’efu
27.00 دلار / چاقو 27.00 دلار / چاقو Oge ikpe 100 n’efu
29.00 دلار / چاقو 29.00 دلار / چاقو Oge ikpe 30 n’efu
مارا – Ahịa dabere na afọ 2 ndenye aha.
Bochum Weebụsaịtị kachasị mma nkeonwe: GreenGeeks، Hostinger، TMD Bochum
Dị ka ọbịa maka ndị edemede، nnabata websaịtị nkeonwe kwesịrị ịbụ nke dị ọnụ ala ma dịkwa mfe iji. N’agbanyeghị ma ọ bụ ibipụta CV ga ma ọ bụ kwalite “njirimara nke aka gị” – Onye na-ewu saịtị dị mfe، njirimara webmail wuru na ọnụahịa dị ụnụ ala bụ ihe kachasị mkpa nata na na na.
ماکا بین ما و الیتا naanị otu weebusaịtị ، Hostinger na-enye ihe kachasị dị ụnụ ala ($ 0.80 / دلار در ماه و ndebanye آها). Bochum TMD na GreenGeeks na-enye ihe dị ụnụ ma ha nwere ebe nrụọrụ weebụ na-akparaghị ókè ma na-enye nkwado ndị ahịa dị mma.
Bochum kachasị mma maka Ndị ụrụ UK: Kinsta، SiteGround
Iji Ghọta ihe na-eme onye web kasị mma maka otu ọnọdụ، ọ dị anyị mkpa ịtụle Nkwụsị.
Were ya dị ka ụgbọ elu – Mgbe ndị ụrụ Bekee rutere websaịtị a na Australia، arịrịọ ya na – esi انگلیس – خاورمیانه – آسیا – استرالیا – آسیا – خاورمیانه – انگلیس Englandlaghachi nsonaazụ. Oge ụgbọ elu bụ laten nke weebụsaịtị ahụ.
Ọ bụrụ na a na-akwado weebụsaịtị ahụ na England، arịrịọ ndị ahụ ga-agbaba n’ime انگلیس naanị، belata oge njem.
Iji hụ otu esi enyocha ihe na ndụ n’ezie، bụ otu ihe atụ.
N’afọ ndị gara aga، saịtị a ị na-agụ bụ nke a na-anakwere na ebe data dị na United States. N’okpuru ebe a، a na-anwale ọsọ saịtị ahụ site na iji ọnọdụ 10 na-eji Bitcatcha.
سایت na nseta ihuenyo، ị nwere ike ịhụ na oge nzaghachi ihe nkesa ahụ dịgasị iche site na ọnọdụ gaa na ọnọdụ. Saịtị a gbara ọsọ (8ms) maka ihe nlere ule na United States ma bukwanu nwayọ maka oghere ule na Japan na استرالیا (367ms na 414 ms).
Na nso ndị na-ege gị ntị nọ nso n’ebe sava gị nọ، ụ bụ obere ọrụ ọ bụ.
جینی صرف nsogbu eji egbu egbu?
Latitude bụ akụkụ ụfọdụ nke ntanetị gị na – ebu ge. سایت ما ịbawanye تاخیر (ahọrọ ị nabata ndị na-ege gị ntị nso)، oge itinye weebụsaịtị gị ga-aka nke ọma.
N’aka ozo، oburu n’onye otutu ndi na – ege gi nti di na otu obodo ma obu otu mpaghara، o kachasi nma ma hapu webusaiti ha nso.
Nke a na – akọwa ihe kpatara na igbu oge ji bụrụ ihe dị mkpa mgbe ị na – ahọrọ ndị ịbịa weebụ.
Yabụ kedu میزبان وب kacha mma maka weebụsaịtị UK?
yeụ ụ mere ọ ọ Nsonazụ ule ya، SiteGround – ebe enwere ebe ihe nkesa na London di، o so na ndi nnabata a nwere oke oso. Kinsta، n’aka nke ọzọ، na-arụ ọrụ na sava nke Google Cloud kwadoro na London (nke egosipụtara na ọsọ ọsọ).
PickAWeb آنفیلد 35 MS 104 MS
Ntaneti obi لیدز 37 MS 126 MS
میزبان لندن ، میدنهد ، ناتینگهام 41 MS 272 MS
Ngwa ngwa ngwa گلوستر 59 MS 109 MS
tsoHost مادنهد 68 MS 582 MS
EUK ịbịa ویکفیلد ، میدن هاهد ، ناتینگهام 34 MS 634 MS
12. Nke kachasị mma maka Webụsaịtị مالزی & سنگاپور
N’ihi na weebụsaịtị dị ich iche nwere mkpa dị iche iche – Kedu ihe